Isku-aadka koobka bariga iyo bartamaha, Somalia oo meel adag gashey | HobyoNet.Com
Tuesday, November 13th, 2012 | Posted by Hnet
Isku-aadka koobka bariga iyo bartamaha, Somalia oo meel adag gashey
Kambalhobyonet)Waxaa Maanta magaalada Kampala ee xarunta wadanka Uganda lagu sameeyay isku-aadka tartanka xulalka qaramada kubadda cagta wadamada bariga iyo bartamaha Africa ee loo yaqaan CECAFA.
Tartanka oo sanadkaan ay ka qeyb galeyso kooxda qaranka kubadda cagta Soomaaliya, ayaa waxaa lagu qaban doonaa wadanka Uganda.
12 dal ayaa sanadkaan tartanka ka qeyb galaaya oo ka mid ah wadamada CECAFA xubnaha ka ah, marka laga reebo Malawi oo lagu casumay kadib markii Djabouti ay sheegtay in aysan sanadkaan ka qeyb gali Karin.
Isku-Aadka oo maanta la sameeyay ayaa waxaa loo qeybiyay 3 qeyb (Group) oo qeybtiiba ay ku jiraan 4 Xul, waxaana la qorsheeyay in wareegga labaad usoo gudbaan 8 Xul.
Labada koox ee ugu dhibcaha badan qeyb kasta ayaa si toos ah wareegga labaad ugu gudbi doona, halka kooxaha kaalimaha seddexaad gala, labada ugu dhibcaha badan ay iyagana soo bixi doonaan.
Tartanka oo socon doona 24-ka bishaan November ilaa 8-da bisha dambe ee December, ayaa kooxaha sidan isgu beegmeen.
Dhammaan kulamada waxa ay ka dhici doonaan 2 garoon oo ku yaalla magaalada Kampala oo lagu kala magacaabo Nmaboole Stadium, oo qaada 45 kun 202 qof, iyo Nakivubo Stadium, oo qaada 15 kun oo qof.
Kulanka ugu horreeya ee furitaanka waxa uu 24-ka bishaan November dhex mari doonaa Ethiopia iyo South Sudan.
Wadanka Uganda oo marti galinaaya sanadkaan, waa dalka heysta ama difaacanaaya tartankan oo kii u dambeeyay ku guuleystay 2011-kii, sidoo kale waa xulka koobabka ugu badan ku guuleystay oo 12 jeer qaatay.
Xulka South Sudan ayaa sanadkaan u ah markii ugu horeysay oo ay ka qeyb galaan.
Soomaaliya waa markii 22-aad oo ay tartankaan ka qeyb galeyso, waxa ayna sanadkaan ku qeyb noqotay xulalka Sudan, Tanzania iyo Burundi.
Kulanka ugu horreeya ee xulka qaranka Soomaaliya, waxa ay la ciyaari doonaan Burundi 25-ka November, kulanka labaad waxa ay wajihi doonaan Sudan 28-ka November, halka kulankooda ugu dambeeya ee qeybta B la yeelan doonaan Tanzania 1-da December.
Xulka Soomaaliya oo lagu naaneyso ‘Ocean Stars” ayaa jimcadii (9-ka bishaan) u duulay Uganda halkaas oo ay tababar ku qaadanaayaan.
Tartanka sanadkaan waxaa loogu magac daray CECAFA Tusker Challenge Cup, kagadaal markii shirkadda Tusker ay qaadatay qandaraaska maalgalinta tartanka ee sanadkaan.